Sirdoonka oo xaqiijiyay dilka sarkaalkii maaliyada u qaabilsanaa Al-shabaab – XOGMAAL.COM
NISA ma aysan baahin magaca ninka a dilay iyo macluumaad dheeraad ah, Balse waxay xaqiijisay in lagu dilay weerar dhinaca cirka ah oo ay ka gacan siiyeen wadamo shisheeye.
Barta Twitter-ka ay ku leedahay Hey’adda Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka ee NISA ayaa lagu daabacay in degaanka Kuunyo Barow ee Gobolka Shabeellaha Hoose lagu dilay xubin Sare oo ka tirsan Shabaab una qaabilsanaa dhinaca maaliyadda.
Xubin sare oo Alshabab ah, kuna sugnaa degmada Kunya Barow, una qaabilsanaa soo aruurinta dakhliga, ayaa waxaa 25/10/2018 gantaal ku dilay xulufada ciidanka amniga Soomaaliyeed. Dhaqaalaha uu shakhsigan soo aruursho ayaa lagu gumaadi jiray shacabka.#NISA
— NISA (@HSNQ_NISA) October 27, 2018
Taliska Mareykanka ee AFRICOM war horey ay u baahiyeen ayaa lagu sheegay in duqeyn ay ka fuliyeen agagaarka degaanka Kuunyo Barow lagu dilay labo xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab, laguna burburiyay gaari ay saarnaayeen.
Wasiirada Ammaanka Maamulada iyo Taliyeyaal ciidan ayaa ku wajahan Kismaayo